मास्क लगाउन आग्रह गर्दा बस ड्राइभरलाई धम्क्या उने एक यात्रुलाई ६ महिना जे ल – Eps Sathi
February 25, 2021 869
दक्षिण कोरियामा एक बस यात्रुलाई बस चढ्ने क्रममा ड्राइभरले मास्क लगाउन आग्रह गर्दा धम्क्या उनेलाई ६ महिना जे. ल जसा. य तोकेको छ। बस चढ्न खोज्ने ति ब्यक्तिले मास्क लगाएका थिएनन्। ड्राइभरले बस चढ्नुअघि मास्क लगाउन आग्रह गर्दा ति ब्यक्तिले ड्राइभरलाई ध म्की दिएका थिए।
५७ बर्षिय ति ब्यक्तिलाई सउलको अदा लतले ६ महिनाको जे ल स जाय तोकेको हो। उसले डिउटिमा रहेका बस ड्राइभरलाई काम गर्ने शिलसिलामा अ वरोध गरेको तथा गा ली ग लौज गरेको मु द्दामा उक्त सजाय तोकेको हो। ५७ बर्षिय ति पुरुषले ३९ बर्षका बस ड्राइभरलाई गा’ लीग लौज गरेका थिए। उनलाई मास्क लगाएर बस चढ्न आग्रह गर्दा उनले बसलाई १५ मिनेटसम्म रोकेका थिए।
ति ब्यक्तीलाई भाइर स फैलनबाट जोगिनका लागि मास्क लगाउनुपर्ने भनि पटक पटक आग्रह गर्दा समेत अटे’र गरेको तथा रोग संक्र मण फैलाउने काममा सहयोग गरेको आरोप लगाइएको छ। सार्वजनिक यातायातमा कोरो ना भा इरस सम्बन्धि नियम पालना नगरी अटेर गर्ने उनि सउल क्षेत्रमा दोश्रा ब्यक्ति हुन। यस अघि पनि अर्का एक ब्यक्ति यस्तै घ टनामा संग्लग्न भएका थिए।
एक हप्तामात्र अघि एक ६० बर्षिया पुरुषलाई यस्तै घट नामा १ बर्ष ६ महिनाको सजय सुनाइएको थियो। उनलाई बस ड्राइभर तथा अन्य यात्रुहरुलाई राम्रोसँग मास्क नलगाई डिस्ट्रब गरेको अभि योग मा स जाय दिइएको थियो।
Prevकोरियामा भोलीबाट खोप अभियान सुरु हुँदै, नेपालीहरुले कुन चरणमा पाउलान खोप?
Nextकोरियामा बूढाबुढीहरु कार्टुन टिप्दै हिँडेका देखिन्छन, आखिर किन?
आइपिओको लस्कर, १२ कम्पनीको आउँदै, हेरौं कुन कुन कम्पनीको आउदैछ